Kalandarka dhexe: astaamaha, taariikhda iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Jadwalka ayaa ah mid ka mid ah tijaabooyinka fikirka waqtiga bulshada. Marka la falanqeeyo, waxaan heli karnaa macluumaad ku saabsan astaamaha kale ee bulshada. Xiriirka ka dhexeeya caqiidooyinka caanka ah iyo caqiidooyinka Masiixiyiinta, qaab-dhismeedka bulshada, fikradaha nolosha aadanaha, iwm. Waxay ka muuqdeen jadwal farshaxan ama suugaaneed oo muujinaya astaamahan, iyo sidoo kale hadallo afeed aan ugu yeerno maahmaahyo. Maanta waxaan ka hadlaynaa kalandarka dhexe.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato taariikhda, muhiimadda iyo sida aad u arki karto kalandarka dhexe.
1 Taariikhda kalandarka dhexe
2 Masiixi ayuu ahaa
3 Kalandarka dhexe: sannado kale
4 Bilaha sanadka
Taariikhda kalandarka dhexe
Intii lagu jiray qarniyadii dhexe, kaalandarradii loo adeegsaday dukumintiyadii qarniyadii dhexe ee dalalka Masiixiyiinta ee Jasiiradda Iberia way ka duwanaayeen kalandarradii aan maanta adeegsan jirnay. Dhinac, kalandarka waxaa badanaa lagu calaamadeeyay xilligii Isbaanishka, inkasta oo aan dhawaan arki doono moodello kale. Dhinaca kale, taariikhda iyo maalinta bisha waxay raacdaa kalandarka Roomaanka oo maalintaas waxay raacdaa waqtiga caadiga ah ee lagu isticmaalo keniisadda.
Qaabkan shukaansiga ayaa umuuqda in looga isticmaali jiray Jasiiradda Iberia tan iyo qarnigii XNUMXaad, waxaana si balaaran loogu xayeysiiyay Visigoths iyo Qarniyadii Dhexe ee Dheer. Guud waxaa la rumeysan yahay in asalkeedu uu ula jeedo Hispanic-kii ay degeen Roomaanku. Marka loo eego aragtidan, waxay dhacday 38 BC, oo ah, 716 markii la aasaasay magaalada Rome, in kasta oo aan ognahay inaysan ahayn. Runtii waxay dhacday ilaa dhammaadkii dagaalladii Cantabrian ee 19 BC.
Sidaa darteed, haddii aan haysanno dukumenti ku taariikheysan xilligii Hispanic, waa inaan ka goynaa 38 sano waxaanan heli doonnaa sannadka u dhigma kalandarka hadda jira. Tusaale ahaan, haddii dukumenti lagu qoro taariikhda wuxuu ahaa 1045, ka dibna loo xisaabiyo sanadka sida ku qoran kalandarkayaga: 1045 - 38 = 1007, oo ah, waxay u dhigantaa sannadka 1007 ee kalandarkayaga.
Masiixi ayuu ahaa
Sannadkii 532, suubban Dionysius the Meager wuxuu xisaabiyay taariikhda uu Ciise Masiix ku dhalan lahaa: Disember 25, 752 kadib aasaaskii Rome. Natiijada dhacdadan aan caadiga ahayn, waxaa la aasaasay in wixii ka dambeeya Diisambar 31, 752, laga soo bilaabo aasaaskii Rome, ay ku xigtay Janaayo 1, sanadka 1 ee xilligii Masiixiyiinta. Ilaa maanta, xisaabinta saxda ah ee Dionysus u adeegsan jirtay in lagu gaaro gabagabada kalandarka lama yaqaan. Ugu dambeyntiina waxay ku dhammaatay inay khalad noqoto inta udhaxeysa 4-7 sano. Si kastaba ha noqotee, tan iyo markii la sharraxay, waxay u adeegtay in la tiriyo sanadaheena.
Sidoo kale waa inaan ku xisaabtamo in sanadka 0 aan laga fikirin. Waa markaa markay bilaabeen inay adeegsadaan soo gaabinta AD oo macnaheedu ahaa anno domini ama sannadka Rabbi. Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo adeegsado haasaawaha xilligii Masiixiyiinta iyadoo kuxiran maalinta loo doortay sannadka inuu bilaabmo. Aan aragno maxay yihiin noocyada kala duwan ee jira:
Sanadka Gudniinka: sanadka wuxuu bilaabmaa 1 janaayo waana qaabka aan hada isticmaalno. Waxaa sidoo kale loo adeegsaday in lagu bilaabo sanadki madaniga ee Roman. Waa nooc ka mid ah sanadka ay isticmaali jireen boqorradii Merovingian qarnigii XNUMX-aad. Tani waxay ahayd saameyntii ay ku faafi kartay Yurub inteeda kale laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Imaatinka Isbaanishka iyo maqaamkeeda rasmiga ah wuxuu bilaabmay qarnigii XNUMXaad.
Sannadkii Jidhka: halkan sanadka wuxuu ka bilaabanayaa 25-ka Maarso, markii ay Maryantii bikradda ahayd ay uur yeelatay Ciise, taasi waa, sagaal bilood ka hor dhalashadii Masiixa.
Sannadka Jirku wuxuu ku taariikheyn karaa laba siyaabood oo kala duwan. Dhinaca kale, waxaan haynaa xisaabinta Pisan ee loo isticmaalo Pisa iyo Siena oo ka mid ah magaalooyinka kale ee Tuscany Talyaani ah. Si aad ugu gudubto jadwal kale, waxay ku filnaan doontaa in laga jaro hal sano laga bilaabo taariikhda haddii ay tahay inta u dhaxeysa 25-ka Maarso iyo 31-ka Diseembar oo ay ahaato sidii hore illaa inta ay ku jirto muddada kale.
Dhanka kale waxaan leenahay xisaabinta Florentine. Sannadku wuxuu ka bilaabmayaa halkan Maarso 25, laakiin ka dib markay Maryantii bikradda ahayd uuraysatay Ciise Masiix. Kadib, haddii taariikhda Florentine ay tahay inta udhaxeysa Janaayo 1 iyo 24 Maarso, sanad waa in lagu daraa si loogu wareejiyo xisaabkeena. Haddii taariikhda Florentine ay tahay inta udhaxeysa 25-ka Maarso ilaa 31-ka Diseembar sidaas ayey ahaan doontaa. Waxaa loo adeegsaday taajkii Aragon ilaa xukunkii Pedro IV.
Kalandarka dhexe: sannado kale
Waxaa jira noocyo kale oo sannado ah oo ka mid ah kalandarka dhexe. Aan aragno waxa ay yihiin:
Sanadkii dhalashada: sanadka wuxuu bilaabmaa maalinta dhalashada Masiixa oo ahayd 25 Disember. Waxaa inta badan laga isticmaali jiray dowladaha Talyaaniga iyo wadamo kale qarnigii 1350aad. Waxaa loo aasaasay sarkaal ahaan magaalada Aragon sanadkii 25. Xaaladdan oo kale, haddii taariikhdu u dhexeyso 31-ka Diseembar illaa XNUMX-ka Diseembar, hal sano waa in laga gooyaa taariikhdaas. Maalmaha intiisa kale waxay isku soo beegmayaan.
Sanadka qiyaamaha: waa nooca sanadka ugu dambeeya ee ka dhex jira kalandarka dhexe. Waa tan ugu adag ee loo wareejiyo kalandarkayaga tan iyo maalinta Axadda Easter ma laha maalin cayiman. Waxay kuxirantahay jadwalka dayaxa iyo goorta loo asteeyo dabaaldega Toddobaadka Quduuska ah.
Laga soo bilaabo jadwalka dhexe bilaha sanadka ee laga helo dukumiintiyada ka bilaabmaya Da'da Dhexe ee sare waa la soo saaray. Hadday tahay kalandarka Roman-ka kadib dib-u-habeyntii Julian ee sannadka u qaybinaysa 12 bilood, sidaan maanta ku naqaan. Aan aragno waa maxay bilaha kalandarka dhexe:
Janawari: magaceedu wuxuu ka yimid erayga albaab wuxuuna xiriir la leeyahay Ilaaha Janus. Sababtuna waxay tahay waa bisha hoggaamisa sanadka.
Febraayo: waxay ka yimaadeen magaca februa oo macnaheedu yahay ciidaha daahirinta. Waa inaan maskaxda ku haynaa in jadwalka Julian sannadaha oo dhan oo loo qaybin karo 4 ay ahaayeen kuwa soo boodaya, halka kuweenna ay tahay 4tii sanaba mar.
Maarso: Waa bil loogu talo galay Ilaaha Dagaal.
Abriil: magaca asalkiisa lama hubo.
Laga yaabaa: magaca waxaa laga yaabaa inuu ka yimaado ilaahadda Roomaanka ee Maia oo xafladdeeda ay Roomaanku xusaan inta lagu jiro bishaas.
Juun: magaca bisha wuxuu ka yimid aasaasihii jamhuuriyaddii Roomaanka.
Julaay: waa magac lagu sharfo Julius Caesar oo aan cidna aashito lahayn bishan.
Agoosto: 3030 30 ayaa si firfircoon loogu magac daray Sextilis, laakiin laga soo bilaabo 8 dhalasho ka hor dhalashada urka Emperor Augustus waxaa loo yaqaan augustus.
Sebtember: Waxaa loogu yeeraa sidan maxaa yeelay waa bishii toddobaad ilaa Maarso
Oktoobar: Markii hore waxay ahayd bishii sideedaad ilaa iyo Maarso.
Nofeembar: Markii hore bishii sagaalaad ilaa Maarso
Diseembar: Markii hore bishii tobnaad ilaa Maarso
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto kalandarka dhexe iyo taariikhdiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Kalandarka dhexe